Lugood metadata Editor: Edit Lugood metadata
> Resource > Video > Sida loo Edit Lugood metadata (MP4, MOV, AVI, MKV, iwm)
Sida loo beddelo metadata ee filimada Lugood (MP4, MOV, AVI, MKV, iwm)? Just halkan ka heli xalka. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa xirfadle editor ah metadata Lugood, si aad edit karaa Lugood movie metadata si fudud. Waxba ma ahan wixii qaab aad filimada Lugood waa, tusaale ahaan MP4, MOV, AVI, MKV, iwm, codsiga talo ka sidaas samayn kara.
Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) waa xoog badan editor ah metadata Lugood. Waad beddeli kartaa metadata aad filimada, sida magaca dhacdo, agaasimayaasha, jilayaasha, sharaxaad, comment, iwm Marka laga reebo sixiddiisa metadata aad movie Lugood, waxa ay sidoo kale u bedeli karaan videos in qaab kasta, shakhsiyeeyo videos la saamayn cajiib ah, gubi videos in DVD iyo xataa soo bixi videos ka badan oo ka mid ah goobaha video qaybsiga sida YouTube.
1 jiid aad movie galay Tifaftiraha metadata Lugood
Fadlan download hore iyo gashato, ka dibna jiidi aad movie Lugood galay ay interface ugu weyn. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "Add Files" button on interface ugu weyn ee ay u geliyaan aad movie Lugood.
2 Calan qaab filim xaq u
Si aad xaalkaa movie Lugood, aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaabka wax soo saarka sida MOV, M4V ah. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa qaab wax soo saarka sida qalab Apple. Just riix "Qaabka Output" icon, dooro "Qaabka" tab, ka dibna dooran MOV, ama M4V. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "Device", ka dibna dooran qalab tufaaxa, tusaale ahaan, iPhone ama iPad.
3 metadata Edit Lugood (MP4, MOV, AVI, MKV, iwm)
Sida aan kor ku soo sheegnay, waxaad bedeli kartaa metadata ee aad filimada Lugood in qaabka MP4, MOV, AVI, MKV, iwm Waxaad riix kartaa icon ah in la furo metadata ka sixiddiisa uu furmo suuqa, ka dibna xaalkaa macluumaad u dhigma.
Sidoo kale haddii aad rabto in aad ku darto macluumaad metadata Lugood si toos ah, kaliya ku qor magaca filimka si sax ah ka dibna riix "baadh", ka dibna riix "OK" oo u badbaadin doonaa. Tani editor metadata Lugood eegi kartaa metadata aad filim ka dibna dhigma macluumaadka si toos ah in yar seconds.
4 Play movie Lugood ku saabsan qalabka Apple
Ka dib markii ay si fiican u tallaabadaas metadata ah, fadlan guji "Beddelaan" badhanka hoose ee interface ugu weyn. Markaas filimka badaley la synced doonaa in Lugood macluumaad metadata. Waxa kale oo aad ka arki kartaa filim dabool ah ee Lugood.